Ny praiminisitra Eswatini dia maty tamin'ny COVID-19 tany amin'ny hopitaly afrikanina atsimo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Eswatini Travel News » Ny praiminisitra Eswatini dia maty tamin'ny COVID-19 tany amin'ny hopitaly afrikanina atsimo
Ambrose Dlamini, ny praiminisitra Eswatini, izay nizaha toetra tsara Coronavirus efa-bolana lasa izay, dia maty tamin'ny faha-52 taonany rehefa avy nampidirina hopitaly tany Afrika Atsimo mpifanila vodirindrina aminy, hoy ny governemantan'olom-bitsy farany ny alahady teo.
“Nandidy ny hampandre ny firenena ny alahelon'ny praiminisitra Ambrose Mandvulo Dlamini ny Firenena ambony. Nodimandry ny tolakandron'iny io folakandro io raha mbola notsaboina tany amin'ny hopitaly atsy Afrika atsimo ”, hoy ny praiminisitra lefitra Themba Masuku.
Nafindra tany Afrika Atsimo i Dlamini tamin'ny 1 Desambra, mba “hitarika sy hanaraka haingana ny fanarenana azy”, avy amin'ny COVID-19. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza i Masuku fa milamina i Dlamini ary mamaly tsara ny fitsaboana.
Notendrena ho praiminisitra i Dlamini tamin'ny Novambra 2018, taorian'ny toerany ho talen'ny birao mpanatanteraka ao amin'ny MTN Eswatini. Niasa tamin'ny sehatry ny banky nandritra ny 18 taona mahery izy, anisan'izany ny talen'ny fitantanana ny Eswatini Nedbank Limited.
Ny firenena afrikanina atsimo misy olona manodidina ny 1.2 tapitrisa hatreto dia nandrakitra trangan'aretina 6,768 mararin'ny aretin'ny taovam-pisefoana, izay 127 no voamarina fa maty, hoy ny minisiteran'ny fahasalamana.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina nandefa ny fiaraha-miory amin'ny fianakavian'ity fanjakana ity ary nilaza fa andro mampalahelo ho an'i Afrika sy ny fizahan-tany izany. Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha ary Patron an'ny ATB, dia nanako izany niaraka tamin'ireo mpitondra eran'izao tontolo izao.
Chris Spielman CBD Oil Review- Mamelombelona ireo tombontsoa azo avy amin'ny solika CBD
St. Kitts & Nevis dia manavao ny fitakiana fitsangatsanganana COVID-19